OPS 75% Alohol လက်သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ဆေး - COVID-19 Defend
NO.208, Dongxi Industral ပန်းခြံ, Wucheng ဧရိယာ, Jinhua, Zhejiang, တရုတ်။
Effervescent သန့်ရှင်းရေး Tablet များ
ဘက်စုံသုံး Effervescent Cleaner မှုတ်ဆေးဘူး
အနံ့ Eliminator မှုန်ရေမွှား
ထိုင် -In Creeper
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / လက်သန့်ရှင်းရေးသုတ်
Benzalkonium ကလိုရိုက် Wipe
OPS လက်သန့်ရှင်းဆေးသည်အရက်သို့မဟုတ်အရက်မပါသောသုတ်ခြင်း (benzalkonium chloride) နှင့်အပိုင်း ၁၀၀ သည်ထုပ်များကိုတစ်ဘူးထဲတွင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည်။ နောက်တဖန်ညစ်ပတ်ပေရေကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလွင်လန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းလန်း၊ သင်၏လက်များကိုထိရောက်စွာသန့်စင်ပေးသည်။ သင်ဆေးကြောချင်သောမည်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုမဆိုသုတ်ပါ။
Mo Moisturizing Aloe နှင့် Vitamin E. ပါ ၀ င်သည်။
အခမဲ့ Quote Get
လက်များအတွက် OPS လက်သန့်ရှင်းရေးသုတ်ဆေး
ယူနစ် ၁၀၀ လုံးပါ ၀ င်သည့်ပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာပိုးသတ်ဆေးဖြင့်သုတ်ခြင်း။ ဤထုတ်ကုန်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
99% အန္တရာယ်ရှိသောကျောက်မျက်များသေဆုံးခဲ့ရသည် နှင့်အတန်ငယ်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်ထိရောက်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
ကြီးစွာသောစျေးနှုန်းမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးကိုသုတ်။ OPS သည် ၇၀-၇၅% အရက်သည်လက်ဖြင့်သုတ်ဆေးများကို benzalkonium chloride wipe များဖြင့်သန့်စင်ပေးသည်
(မပါဝင်သည် alochol) ။
လက်သန့်ရှင်းရေးသုတ်ဆေးသည် Covid-19 အတွက်ထိရောက်မှုရှိပါသလား။
ထုတ်ကုန်များများစားစားရှိတာကိုသင်သတိပြုမိမှာပါ၊ ဒါကြောင့် wipes အချို့ကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲသည်။
သင်ခရီးသွားလာစဉ်၊ တောင်တက်နေစဉ်သို့မဟုတ်အိမ်မှဝေးရာသို့ထွက်ခွာသွားသည့်အချိန်တွင်သင်သူတို့ကိုလိုချင်သည်ဖြစ်စေမလုပ်နိုင်ပါ သင်တို့လက်ကိုစင်ကြယ်စေကြလော့
ဆပ်ပြာနှင့်ရေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းအတွက်နှစ် ဦး စလုံးအကောင်းဆုံးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအခြေအနေများလိုအပ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအတူ
(ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာများ၊ စားသောက်ဆိုင်မီးဖိုချောင်စသည်တို့) ၀ န်ထမ်းများနည်းတူပိုးသတ်ဆေးသုတ်ဆေးသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
ဤသုတ်သည်အထူးသဖြင့်လက်တွေ့ကျသည် အဏုဇီဝသက်ရှိအမျိုးမျိုးကိုဖယ်ရှားပါ လက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထု၏ဤအမျိုးအစားကနေ။
ထို့အပြင်လက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုခန်းခြောက်ရန်။ လျင်မြန်စွာပြုမူ။ အလွန်အငွေ့ပျံနိုင်သော Wipe များကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည်။
၎င်းသုတ်သည်မည်မျှပိုးသတ်ဆေးနှင့်မည်သည့်စွမ်းရည်ပါ ၀ င်သည်ကိုသိရှိရန်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
လက်ပေါ်မှာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒြပ်ပေါင်းများစွာပါ ၀ င်သည့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်များကိုအသုံးမပြုဘဲဖြစ်နိုင်သမျှသဘာဝအရအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရေမွှေးပါ ၀ င်သောကြောင့်အနံ့ပြင်းသည့်သုတ်များကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Wipe ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအမျှင်များမထွက်သောကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်
active ပစ္စည်း: Ethyl အရက်၊ Deionized Water နှင့်အခြားအရာများ။
ဖွင့်ရန်အဖုံး၏ထိပ်ရှိ tab ကိုချီပါ။
ပစ္စည်၏သယ်ဆောင်စင်တာမှတဆင့်ပထမ ဦး ဆုံးသုတ်ထုတ်ဆွဲထုတ်။
လက်သန့်ရှင်းဆေးသုတ်ဆေးကိုဘယ်မှာမှာမှာရမှာလည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးနောက်ထပ်အချက်အလက် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
လက်သန့်ရှင်းရေးဆေး wipes စာရွက်
ကုန်ပစ္စည်းအထူးအသေးစိတ်။ အတွင်းပိုင်းကို 100 အပိုင်းပိုင်းသုတ်
ပါဝင်သောအရာ Ethyl Alcohol or benzalkonium chloride, Deionized Water ။
MOQ 5,000 ပုလင်း
အဆိုပါရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလူ့ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ ကျေးဇူးပြု. ကြယ်.
NO.208, Dongxi စက်မှုပန်းခြံ, Wucheng, Jinhua, Zhejiang, တရုတ်။
ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအသေးစိတ်အံ့သြဖွယ်အပြင်ပန်း, အတွင်းပိုင်းကားတစ်စီးထုတ်ကုန်သန့်ရှင်းရေး, မော်တော်ကားရေဆေးထုတ်ကုန်လက္ကား, ကားတစ်စီး။ ဘက်စုံသုံးအိမ်ထောင်စုသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်အတွက်သုံးပြီးတက်ဘလက်များသန့်ရှင်းရေး effervescent ။
NO.208, Dongxi Industral ပန်းခြံ, Wucheng ဧရိယာ, Jinhua, တရုတ်။
မူပိုင်ခွင့်© 2017 Zhejiang Ops သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာ Co. , Ltd All Rights Reserved